MY SOMALI CULTURE: Cumar Shooli (Waraysi Gaar ah oo xiiso badan).
Cumar Shooli (Waraysi Gaar ah oo xiiso badan).
Waa madaalahii Soomaaliyeed Al Fanaan Cumar Shooli, oo booqasho rasmi ah ku yimid wadanka Maraykankamm, isaga oo siiyey wareysigan gaarka ah Somali Tv ee Minissot. Waxa uu ku qaadaa dhigay waraysigiisan taariikhdiisa sooyaalka ah ee uu ku kobciyey fanka Soomaliyeed, isagoo walina ugu jira dadaal balaadhan oo intii hore ka sii weyn.
Waraysigan oo ah mid in badan ay sugayeen taageerayaashiisa aadka u badani, waa mid uu kaga hadlayo sidii uu fanka ku soo galay, ugu hano qaaday iyo, waliba aragtidiisa ku aadan fanaaniinta da'da yar ee hada jira. Isaga oon la kala hadhin waano iyo talo soo jeedin waxii looga baahnaa, waxa uu ku faraxsan yahay in uu ka mid yahay bahda waayeelka fanka Soomaliyeed ee imika nool. Cumar shooli oo ah fanaan culus oo isku darsaday deganaan, waayo aragnimo dheer iyo xilkasnimo, wuxuuna ka mid yahay fanaaniinta waaweyn ee Soomaliyeed ee aadka loo ixtiraamo. Aniga oo intaa kaga baxaya hordhaca waraysigan aan soo xiganay, waxa mahad gaar ah iska leh bahda Somali Tv Minnisota, guud ahaana fanaankeena weyn ee Cumarshoooli ama Madaalaha Fanka Soomaliyeed.
Ka mid noqo dadka ugu horeeya ee ogaada barnaamijyada cusub ee websitekani soo gudbiyo, kana dhigo MY SOMALI CULTURE barta caweyskaaga. Kana dhigo MY SOMALI CULTURE barta caweyskaaga, una gudbi ehelka iyo asxaabtaadaba. Mahadsanid.
La wadaad ehelka iyo asxaabtaadana.
Posted by Milgo at 12:04 PM
Labels: Cumar Shooli Waraysi